COP19: Mifady Hanina Ho Amin’ny Toetr’Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2013 21:35 GMT
Vakio amin'ny teny polski, বাংলা, Español, 日本語, English
Mpitarika ny fifampiraharahana Filipino Yeb Saño. sary avy amin'ny mpisera Flickr 350.org eo ambany fahasoan-dalana Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
Nanapa-kevitra ny tsy hihinan-kanina mandra-pahitany ny vahaolana mivaingana avy amin'ireo mpifampiraharaha ao amin'ny Vovonan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fiovaovan'ny Toetr'Andro ao Polonina (COP19) i Yeb Saño, mpitarika ny delegasion'i Filipina ao amin'ny Firenena Mikambana. Faniriany mba hitondra “toetr'[andron]-drariny ho an'ny firenena mahantra indrindra” ity fotoana ity izay nampifandraisiny tamin'ny Tafiotra Mahery Haiyan, izay niteraka fahafatesan'olona mihoatra ny 4000 sy 4 tapitrisa voatery nifindra toerana, [noho ny] fikorontanan'ny toetr'andro.
Nanomboka tamin'ny fampiasana teny ifankafantarana #FastingForTheClimate [Mifady hanina ho amin'ny toetr'andro] i Saño hampielezany ny heviny sy ny tolony ato amin'ny aterineto:
Nisy ireo mpifampiraharaha hafa momba ny toetr'andro, tahaka an'i Pablo Solón avy any Bolivia, nikirakira ny Twitter hanohanana an'i Saño:
Amin'ny alalan'ny hetsika ihany no ao handravana ny tsy fihetsehana ao amin'ny #UNFCCC. fanohanana manontolo avy aminay ho an'ny mpitokona tsy hihinan-kanina @yebsano
Nanatsonga tenin'i Mahatma Gandhi ihany koa i Saño nampifandray ny fampianaran'i (Gandhi) amin'ny fifadian-kanina ataony manokana:
“Sambatra rehefa mifanaraka izay eritreretinao, izay lazainao ary izay ataonao” – Mahatma Gandhi
Saingy nihoatra ny Twitter ny fifadian-kanina ka nahatratra ny tontolom-bilaogy.
David Tong, mpisolovava momba ny zon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisampirenena avy any Zealand Vaovao sady sakaiza ao amin'ny Tetisaka Mandraisa MPifampiraharaha (Adopt a Negotiator Project), nibilaogy momba ny ahiahiny amin'ny fomba fihetsiky ny governemantan'ny fireneny manoloana ny resaka fikorontanan'ny toetr'andro. Nanonona an'i Saño ihany koa izy ao amin'ny lahatsorany:
Menatra ny governemantako aho satria nihomehy ry zareo rehefa nampifandray ny Tafiotra mahery Haiyan tamin'ny fikorontanan'ny toetr'andro i Russel Norman avy ao amin'ny Antoko Maitson'i Aotearoa Zealand Vaovao. Nihomehy ry zareo. Notsiratsirain-dry zareo izy. Nihiaka ry zareo “mahamenatra”. Aleo averiko lazaina indray: Rehefa notsongaina tao amin'ny Parlemanta Zealand Vaovao i Yeb Saño dia nihomehy ny olona. Nandravarava tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tafiotra ratsy indrindra voarakitra. Nahafaty olona mihotra ny 10.000. 478.000 ny olona nafindra toerana. Tena nisy, olombelona, vahoaka, miaraka amin'ny fianakaviana sy ny ankizy ary aina maro sy olo-notiavina maro. Olona tena nisy ny mpitarika ny fifampiraharahana avy any Filipina antsoina hoe Yeb Saño, ary niangavy izy ny hifady hanina mandra-pahavitan'ny fifampiraharahana ho amin'ny hoavintsika rehetra. Ary dia nihomehy ireo mpitarika voafidy. Tsy nisy nihomehy ny olona teto Varsovia. Raha ny marina, 30 na nihoatra ireo olona tonga sy nifady hanina niaraka tamin'i Yeb.
Nibilaogy momba ny Tetikasa Mandraisa Mpifampiraharaha ihany koa i Carlie Labaria, manampahaizana manokana momba ny Fampandrosoana avy any Filipina. One of her last posts dMitantara ny zavamisy amin'izao fotoana izao ao an-tanindrazany ampitahaina amin'ny fahadisoam-panantenny momba ny famahana olana amin'izao fotoana izao amoin'ny fifampiresahana momba ny toetr'andro amin'izao fotoana izao ao Polonina ny iray amin'ny bilaogy nosoratany farany:
Mieritreritra momba ny reniko sy raiko ary ny rahavaviko kely, ny tanindrazako, ny vahoakan'i Visayas indrindra fa i Tacloban sy Panay aho. Hirifiry tahaka ny ahoana no ilaina vao ho tsapan'ny mpitondra eto amin'izao tontolo izao fa izany miresaka Fahaverezana sy Fahapotehana izany dia momba ny fiavotan-tena, fahamendrehana ary rariny?
Nandritra ny vovonana, mpanao politika an-jatony no nitady lalana – sy hahatratra fifanarahana no tena idealy – amin'ny fomba ahafahan'ny fireneny misoroka ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetr'andro ho tafahoatra. Saingy samy manana ny tombontsoany manokana ny isam-pirenena, ka hiadana dia hiadana mila mandany fotoana noho izay iheverana azy matetika ny fahazoana fifanarahana.
Roa andro sisa dia ho tapitra ny fifampiresahana momba ny toetr'andro ao Polonina, ary mbola mifady hanina hatrany i Saño. Nanao fanentanana tamin'ny aterineto ihany koa izy hanerena ny governemanta handray andraikitra tokoa ao amin'ny Vovonana.
Nanolotra ny fanangona-tsonia matanjaka nahazoany sonia 600.000 tao amin'i #Avaaz ny mpandray anjaran'i Filipina momba ny toetr'andro @YebSano
Tian'i Saño ny hisian'ny “fomba fiasa vaovao eo ambany Dinan'ny Firenena Mikambana momba ny Fikorontanan'ny Toetr'Andro mamela ny firenena faran'izay mahantra mampihena ny fahaverezana mifandraika amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro”. Nandritra ny fizotry ny raharaha tao amin'ny Firenena Mikambana, voatondro ho tompon'andraikitra lehibe amin'ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetr'andro noho ny fandefasany karbona maro dia maro isan-taona, ireo firenena mandroso.
Ny vokatr'ireo fifampiresahana ireo no ho lakilen'ny fahombiazana amin'ny fifampiraharahana amin'ny vovonana manaraka, izay hotontosaina any Lima, Però, amin'ny taona 2014.
Hong Kong (Shina) 22 Septambra 2021
Fanatanjahantena 29 Jolay 2021
Indonezia 29 Jona 2021